ဦးနှောက်နဲ့နှလုံးသား တစ်ခုခုကိုရွေးချယ်ရတော့မယ်ဆိုရင် ဘယ်အရာကိုရွေးချယ်မလဲ – Trend.com.mm
ဦးနှောက်ကဆုံးဖြတ်တာကိုလက်ခံမှာလား?နှလုံးသားကပြောတာကိုနားထောင်မှာလား?သင့်ကို ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးမေးလာမယ်ဆိုရင်အဖြေအသင့်ရှိနေပြီလား? ဒီမေးခွန်းက အတော်လေး ခေါင်းစားစရာပါပဲ။ဘ၀တစ်ခုကိုလျှောက်လှမ်းတော့မယ်ဆိုရင် ဦးနှောက်ရဲ့ စဉ်းစား
ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုတာ လိုသလို နှလုံးသားကပြောစကားကိုလည်းနားထောင်ရတာတွေ ရှိတာပါပဲ။နှလုံးသားကလိုချင်တာနဲ့ဦးနှောက်ကလိုချင်တာထပ်တူကျနေရင်တော့ အတိုင်းထက်အလွန်ပေ့ါလေ။အဲ ထပ်တူမကျတဲ့အခါမှာတော့ စဉ်းစားရပါပြီ။ မေးခွန်းကိုနားမလည်ဘူးတော့မလုပ်နဲ့နော်။အရှင်းဆုံးဥပမာပေးရရင် သင့်နှလုံးသားက တကယ်ချစ်တဲ့သူကိုဦးနှောက်ကမသင့်တော်ဘူး၊မချစ်သင့်ဘူးလို့စဉ်းစားနေမိတဲ့အခါမျိုးမှာပေါ့။
ဒါမှမဟုတ်လည်း ဒီပစ္စည်းလေးကို လိုချင်တယ်၊ဦးနှောက်ကတော့တစ်ခြားပစ္စည်းက ပိုကောင်းတယ် လို့ပြောနေတယ်။ဒါဆိုရင် သင်ဘာလုပ်မှာလဲ?
ဦးနှောက်နဲ့နှလုံးသားဆိုတာ မတည့်အတူနေဆိုသလိုပေါ့။နှစ်ခုလုံးကလိုအပ်တာပါပဲ။ ဒီမေးခွန်းတင်ခေါင်းစားတာမဟုတ်ပါဘူး။အချစ်နဲ့ငွေ၊သူငယ်ချင်းနဲ့အောင်မြင်မှု စသဖြင့် မကြာခဏဆိုသလို ဦးနှောက်နဲ့နှလုံးသားက ရန်ဖြစ်ရပါတယ်။အခုလို ဦးနှောက်နဲ့နှလုံးသား ရွေးချယ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာ ဦးနှောက်ကိုရွေးချယ်တဲ့သူရှိသလို နှလုံးသားကိုရွေးချယ်တဲ့သူ လည်းရှိပါတယ်။အဓိကကတော့ကိုယ်ဘာကိုပဲရွေးချယ်ရွေးချယ်၊နောင်တမရမိဖို့ပဲ
ဒါဆိုဒီစာကိုရေးနေတဲ့သူရော ဘာကိုရွေးမှာလဲလို့ မေးချင်မေးနိုင်စရာရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် အဖြေပေးရမယ်ဆိုရင် ဦးနှောက်နဲ့နှလုံးသားမဟုတ်တဲ့တတိယမြောက်ရွေးချယ်မှု လို့ အဖြေပေးပါမယ်။ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာဆို ရွေးချယ်ရမယ့်အခြေအနေနှစ်ခုအပြင် တတိယအခြေအနေ၊တတိယရွေးချယ်မှုဆိုတာရှိပါတယ်။နှလုံးသားကလိုချင်တာနဲ့ဦးနှောက်ကအကောင်းဆုံးလို့ဆုံးဖြတ်ပေးတာကိုရွေးချယ့်အစား စာဖတ်သူတွေလည်းတတိယရွေးချယ်မှုကို
တတိယရွေးချယ်မှုဆိုတာဘာလဲ?တတိယရွေးချယ်မှုဆိုတာ အခြေအနေတွေက သင့်ကိုပြောင်းလဲခွင့် မပေးပါနဲ့။ သင်ကသာ အခြေအနေတွေကိုပြောင်းလဲပါလို့ဆိုလိုတာပါ။ ဥပမာပေးရရင် ငွေလည်းများများရှာချင်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အချိန်ပိုဆင်းအလုပ်လုပ်ရမယ် ၊ဒါပေမဲ့ မိသားစုနဲ့လည်းအချိန်အတူကုန်ဆုံးချင်တယ်နှစ်ခုထဲကတစ်ခုကိုရွေးရတော့မယ်ဆိုရင်… ဘာလို့နှစ်ခုထဲကတစ်ခုရွေးမှာလဲ? တတိယမြောက်ရွေးချယ်မှုဖြစ်တဲ့ ငွေလည်းများများရပြီး မိသားစုနဲ့လည်းအချိန်ကုန်ဆုံးရအောင် အချိန်ပိုဆင်းမယ့်အစား အိမ်မှာပဲကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေးသေးသေးလေး လုပ်လိုက်ပေါ့။ဒါဆို ငွေလည်းရသလို မိသားစုနဲ့လည်းအတူ
ဒီလိုပစ္စည်းတွေ၊အလုပ်တွေက သိပ်ခေါင်းမစားရပေမဲ့ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး အတူပါမယ့် လက်တွဲဖော် ကိုရွေးတဲ့အခါမှာတော့ သေချာစဉ်းစားရပြီဟုတ်!ဟုတ်ပြီ စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။ သင်က လူတစ်ယောက်ကိုချစ်တယ်၊ဒါပေမဲ့ ဦးနှောက်ကတော့ဒီလူကိုမရွေးနဲ့၊ဒီလူက မင်းနဲ့မထိုက်တန်ဘူး၊သူ့ထက်သာတွေရှိတယ်၊မိဘတွေက သဘောတူမှာမဟုတ်ဘူး။သူနဲ့သာဆို အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးစသဖြင့် ဦးနှောက်ကတော့ ခံစားချက်မပါလို့ အကောင်းဆုံးတွေပဲ ရွေးပေးပါလိမ့်မယ်။ဒါဆို တတိယမြောက်ရွေးချယ်မှုကိုသတိရလိုက်ပါ။ဦးနှောက်ကလည်း အိုခေကောင်းပြီလို့စဉ်းစားမိတဲ့အထိ၊နှလုံးသားကလည်းသူတစ်ယောက်တည်းကိုပဲလိုချင်တယ်လို့သေချာတဲ့အထိ အချိန်ခဏလေးစောင့်ကြည့်လိုက်ပါ။Timing ကိုက်တယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း Timing ဖြစ်တဲ့အချိန်ကလေး စောင့်လိုက်ပါ။
စကားလက်ဆောင်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့…ဘယ်တော့မှ နှစ်ခုထဲကတစ်ခုရွေးချယ်ရမယ့် အခြေအနေရောက်တဲ့အထိခွင့်မပြုပါနဲ့။ဇွဲမလျှော့ပါနဲ့။အလုပ်ကိုကြိုးစားပါ။စမတ်ကျကျနေပါ။သင်ဖြစ်စေချင်တဲ့အခြေအနေအတိုင်းဖန်တီးပါ။
ဦးနှောကျကဆုံးဖွတျတာကိုလကျခံမှာလား?နှလုံးသားကပွောတာကိုနားထောငျမှာလား?သငျ့ကို ဒီလိုမေးခှနျးမြိုးမေးလာမယျဆိုရငျအဖွအေသငျ့ရှိနပွေီလား? ဒီမေးခှနျးက အတျောလေး ခေါငျးစားစရာပါပဲ။ဘဝတဈခုကိုလြှောကျလှမျးတော့မယျဆိုရငျ ဦးနှောကျရဲ့ စဉျးစား
ဆုံးဖွတျခကျြဆိုတာ လိုသလို နှလုံးသားကပွောစကားကိုလညျးနားထောငျရတာတှေ ရှိတာပါပဲ။နှလုံးသားကလိုခငျြတာနဲ့ဦးနှောကျကလိုခငျြတာထပျတူကနြရေငျတော့ အတိုငျးထကျအလှနျပေ့ါလေ။အဲ ထပျတူမကတြဲ့အခါမှာတော့ စဉျးစားရပါပွီ။ မေးခှနျးကိုနားမလညျဘူးတော့မလုပျနဲ့နျော။အရှငျးဆုံးဥပမာပေးရရငျ သငျ့နှလုံးသားက တကယျခဈြတဲ့သူကိုဦးနှောကျကမသငျ့တျောဘူး၊မခဈြသငျ့ဘူးလို့စဉျးစားနမေိတဲ့အခါမြိုးမှာပေါ့။
ဒါမှမဟုတျလညျး ဒီပစ်စညျးလေးကို လိုခငျြတယျ၊ဦးနှောကျကတော့တဈခွားပစ်စညျးက ပိုကောငျးတယျ လို့ပွောနတေယျ။ဒါဆိုရငျ သငျဘာလုပျမှာလဲ?
ဦးနှောကျနဲ့နှလုံးသားဆိုတာ မတညျ့အတူနဆေိုသလိုပေါ့။နှဈခုလုံးကလိုအပျတာပါပဲ။ ဒီမေးခှနျးတငျခေါငျးစားတာမဟုတျပါဘူး။အခဈြနဲ့ငှေ၊သူငယျခငျြးနဲ့အောငျမွငျမှု စသဖွငျ့ မကွာခဏဆိုသလို ဦးနှောကျနဲ့နှလုံးသားက ရနျဖွဈရပါတယျ။အခုလို ဦးနှောကျနဲ့နှလုံးသား ရှေးခယျြခိုငျးတဲ့အခါမှာ ဦးနှောကျကိုရှေးခယျြတဲ့သူရှိသလို နှလုံးသားကိုရှေးခယျြတဲ့သူ လညျးရှိပါတယျ။အဓိကကတော့ကိုယျဘာကိုပဲရှေးခယျြရှေးခယျြ၊နောငျတမရမိဖို့ပဲ
ဒါဆိုဒီစာကိုရေးနတေဲ့သူရော ဘာကိုရှေးမှာလဲလို့ မေးခငျြမေးနိုငျစရာရှိပါတယျ။ အဲ့ဒီအတှကျ အဖွပေေးရမယျဆိုရငျ ဦးနှောကျနဲ့နှလုံးသားမဟုတျတဲ့တတိယမွောကျရှေးခယျြမှု လို့ အဖွပေေးပါမယျ။ဘယျလိုအခွအေနမြေိုးမှာဆို ရှေးခယျြရမယျ့အခွအေနနှေဈခုအပွငျ တတိယအခွအေနေ၊တတိယရှေးခယျြမှုဆိုတာရှိပါတယျ။နှလုံးသားကလိုခငျြတာနဲ့ဦးနှောကျကအကောငျးဆုံးလို့ဆုံးဖွတျပေးတာကိုရှေးခယျြ့အစား စာဖတျသူတှလေညျးတတိယရှေးခယျြမှုကို
တတိယရှေးခယျြမှုဆိုတာဘာလဲ?တတိယရှေးခယျြမှုဆိုတာ အခွအေနတှေကေ သငျ့ကိုပွောငျးလဲခှငျ့ မပေးပါနဲ့။ သငျကသာ အခွအေနတှေကေိုပွောငျးလဲပါလို့ဆိုလိုတာပါ။ ဥပမာပေးရရငျ ငှလေညျးမြားမြားရှာခငျြတယျ။အဲ့ဒါကွောငျ့အခြိနျပိုဆငျးအလုပျလုပျရမယျ ၊ဒါပမေဲ့ မိသားစုနဲ့လညျးအခြိနျအတူကုနျဆုံးခငျြတယျနှဈခုထဲကတဈခုကိုရှေးရတော့မယျဆိုရငျ… ဘာလို့နှဈခုထဲကတဈခုရှေးမှာလဲ? တတိယမွောကျရှေးခယျြမှုဖွဈတဲ့ ငှလေညျးမြားမြားရပွီး မိသားစုနဲ့လညျးအခြိနျကုနျဆုံးရအောငျ အခြိနျပိုဆငျးမယျ့အစား အိမျမှာပဲကိုယျပိုငျ စီးပှားရေးသေးသေးလေး လုပျလိုကျပေါ့။ဒါဆို ငှလေညျးရသလို မိသားစုနဲ့လညျးအတူ
ဒီလိုပစ်စညျးတှေ၊အလုပျတှကေ သိပျခေါငျးမစားရပမေဲ့ ဘဝတဈလြှောကျလုံး အတူပါမယျ့ လကျတှဲဖျော ကိုရှေးတဲ့အခါမှာတော့ သခြောစဉျးစားရပွီဟုတျ!ဟုတျပွီ စဉျးစားကွညျ့ရအောငျ။ သငျက လူတဈယောကျကိုခဈြတယျ၊ဒါပမေဲ့ ဦးနှောကျကတော့ဒီလူကိုမရှေးနဲ့၊ဒီလူက မငျးနဲ့မထိုကျတနျဘူး၊သူ့ထကျသာတှရှေိတယျ၊မိဘတှကေ သဘောတူမှာမဟုတျဘူး။သူနဲ့သာဆို အဆငျပွမှောမဟုတျဘူးစသဖွငျ့ ဦးနှောကျကတော့ ခံစားခကျြမပါလို့ အကောငျးဆုံးတှပေဲ ရှေးပေးပါလိမျ့မယျ။ဒါဆို တတိယမွောကျရှေးခယျြမှုကိုသတိရလိုကျပါ။ဦးနှောကျကလညျး အိုခကေောငျးပွီလို့စဉျးစားမိတဲ့အထိ၊နှလုံးသားကလညျးသူတဈယောကျတညျးကိုပဲလိုခငျြတယျလို့သခြောတဲ့အထိ အခြိနျခဏလေးစောငျ့ကွညျ့လိုကျပါ။Timing ကိုကျတယျဆိုတဲ့စကားအတိုငျး Timing ဖွဈတဲ့အခြိနျကလေး စောငျ့လိုကျပါ။
စကားလကျဆောငျပေးရမယျဆိုရငျတော့…ဘယျတော့မှ နှဈခုထဲကတဈခုရှေးခယျြရမယျ့ အခွအေနရေောကျတဲ့အထိခှငျ့မပွုပါနဲ့။ဇှဲမလြှော့ပါနဲ့။အလုပျကိုကွိုးစားပါ။စမတျကကြနြပေါ။သငျဖွဈစခေငျြတဲ့အခွအေနအေတိုငျးဖနျတီးပါ။